Jarmalka: Suuriyaan is qarxiyay oo IS xiriir la leh - BBC Somali
Jarmalka: Suuriyaan is qarxiyay oo IS xiriir la leh
Lahaanshaha sawirka NEWS5
Image caption Saddex ka mid dhaawaca ayaa dhaawacooda uu culus yahay
Ninkii reer Suuriya ee isku qarxiyay magaalada Ansbach ee Jarmalka, Axadii, ayaa sameeyay video uu balanqaadayo inuu xiriir la leeyahay hogaamiyaha kooxda la magac baxday dowladda Islaamiga ee IS, ayuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee gobolka Baveria.
Joachim Hermann, ayaa sheegay in laba telefoon, dhowr sim card iyo Laptop laga helay ninka 27- jirka gurigiisa iyo maydkiisa agtiisa.
Ninka ayaa ku hanjabay video-ga inuu ka aargudanayo Jarmalka.
Ninka weerarka qaaday ayaa ku sheegay Video-ga "in Ilaahey dartii uu balanqaadayo inuu xiriir la leeyahay hogaamiyaha IS ee Abu Bakr al Baqdadi. Wuxuu ku dhawaaqay fal aargudasho oo looga soo horjeedo Jarmalka sababtoo ah Islaamka ayay hortaagan yihiin" ayuu sheegay wasiirka.
Ninka oo ah reer Suuriya oo loo diiday in la siiyo sharciga qaxootiga ayaa is qarxiyay isagoo dhaawacay 15 qof meel u dhow meel riwaayad ama bandhig faneed lagu qabananayay ee magaalada Ansbach.
Ninka ayaa sitay boorso ay ka buuxaan waxyaalaha qarxa.
Wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka Bavaria, Joachim Herrmann, ayaa sheegay in inka 27 jirka uu is qarxiyay ka dib markii loo diiday inuu soo galo meesha lagu dhigayay riwaayada ama lagu tumayay muusiga.
Image caption Boorsada ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa ayaa agtaalay maydka ninka
Ilaa 2,500 oo qof ayaa laga bixiyay goobta qaraxa ka dib.
Bavaria ayaa aragtay weerarao istaba joog ah ka dib markii weerar tooray lagu qaaday train Isniintii taasoo ay sheegteen kooxda la magac baxday IS.
Qaraxa Ansbach, ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay 22.10 PM ee habeenimo banaanka maqaayada Eugens Weinstube ee bartamaha magaalada.
Ansbach waxaa ku nool 40,000 oo qof, waxaana ku yaala saldhig milatari oo Maraykan ah.
Bombka ayaa ku qarxay meel u dhow meesha laga soo galo Ansbach Open oo ah meel korka ka banaan oo muusiga lagu tumo.
Image caption Boliiska ayaa baaray hotel ay degan yihiin dadka magangalyada waydiisanaya oo uu deganaa ninka is qarxiyay
Thomas Debinski, oo goob jooge ahaa ayaa sheegay jahawareer markii qaraxa dhacay, dadka qaar ayaa u malaynayay inay ahayd qarax gaas.
"Ka dibna dadka ayaa soo agmaray oo sheegay inay ahayd boorsada dhabarka lagu qaato ayna qaraxday."
Saddex qof oo ka mid ah dhaawaca ayaa waxaa soo gaaray dhaawac culus ayuu sheegay boliiska.
Ciidamada ammaanka ayaa xiray bartamaha magaalada iyadoo dadka qabiirada ku ah waxayaalaha qarxa ay baarayaan nooca qaraxa bombka ee uu ninka isticmaalay.